जायन अली सलमान: चार वर्षकै उमेरमा फुटबल खेल्न आर्सनल क्लबको प्री–अक्याडमीमा भर्ना
एजेन्सी । यूकेको एउटा चर्चित फुटबल क्लबको ध्यान एक चारवर्षे बालकमाथि परेको छ । आर्सनल प्री–अक्याडमीमा भर्ना हुन पाउने यी बालक अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कान्छा खेलाडी हुन् । उनको सीप र क्षमता उनको भन्दा दुईगुना उमेर भएका खेलाडीको जस्तो छ। उनी जायन अली सलमान हुन् । उनी चार वर्षका भए । उनलाई मनपर्ने टिम आर्सनल हो…
भारतको एक दुर्गम क्षेत्रकी १५ वर्षीया एक बालिकाको आँखाबाट दैनिक रुपमा ढुंगा निस्कने गरेको छ । पछिल्लो दुई महिनादेखि यस्तै हुँदै आइरहेको बालिकाको आफन्तहरुले बताएका छन् । तर डाक्टरहरुले यसको कुनै वैज्ञानिक आधार नरहेको बताउँदै आएका छन् । बालिकाको परिवारका अनुसार गत जुलाई १७ देखि उनको आँखाबाट साना ढुंगाहरु खस्न थाल…
रोम । खाबी लेम टिकटकमा सबैभन्दा चर्चित व्यक्तिको सूचीमा दोस्रो स्थानमा रहेका छन् । अमेरिकी नृत्याङ्गना चार्ली डी’अमेलियोपछि टिकटक प्रख्यातीको दोस्रो स्थानमा लेमको नाम दर्ता भएको छ । उनको टिकटक खातालाई ९० करोडभन्दा बढी व्यक्तिले फलो गर्छन् र त्यसमा उनले एक अर्ब ३० करोड लाइक पाएका छन् । कैयौ व्यक्तिहरुले लेमले अम…
एजेन्सी । २५ हजार अमेरिकी डलर पर्ने यो हीरा हावामा हुने कार्बनबाट बनेको हो । एथेर डायमन्ड्सले भने- हावाबाट सङ्कलित कार्बनबाट हीरा बनाउने हामी पृथ्वीकै पहिलो र एक मात्र उत्पादक हौँ । यसको अर्थ हीरामा हुने कार्बनका प्रत्यक अणुले पृथ्वीलाई तताइरहेको थियो । कार्बन सोस्ने प्रविधिले हावाबाट कार्बन डाईअक्साइड छुट्ट…
इजरेलः १५ सय वर्ष पुरानो विशाल र प्राचीन मदिरा बनाउने उद्योग पत्ता लाग्यो
एजेन्सी । एउटा १५ सय वर्ष पुरानो वाइन (एक प्रकारको मदिरा) बनाउने स्थल इजरेलमा फेला परेको पुरातत्त्वविद्‌हरूले बताएका छन्। उक्त कम्पनी त्यसबेला संसारकै सबभन्दा ठूलोमा गनिन्थ्यो। तेल अभिभको दक्षिणमा रहेको याभ्नेमा बाइजनटाइन समयको विशाल वाइनरी पत्ता लागेको हो । त्यसले वर्षमा बीस लाख लिटर वाइन उत्पादन गर्…
नोबेल शान्ति पुरस्कार फिलिपिन्स र रुसी पत्रकारलाई
काठमाडौं । यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार फिलिपिन्सकी मारिया रेसा र रुसका डिमिट्री एन्ड्रियेभिक मुरोटोभलाई प्रदान गरिने भएको छ । शुक्रबार उनीहरुलाई संयुक्तरुपमा यो पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको हो । दुवैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि गरेको प्रयासलाई सम्मान गरको भन्दै सो पुरस्कार प्राप्त गरेका ह…
नोबेल साहित्य पुरस्कारका १५ विजेताहरू को हुन् ? जान्नुहोस् सूचीसहित
स्टकहोम । यस वर्षको विश्वप्रसिद्ध नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता आज घोषणा हुँदैछ । यसको पूर्वसन्ध्यामा पछिल्ला १५ वर्षका विजेताको सूची एएफपीले आज सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार : २०२० : लुइस ग्लक (अमेरिका) २०१९ : पिटर ह्यान्डके (अस्ट्रिया) २०१८ : ओल्गा टोकारक्जुक (पोल्याण्ड) २०१७ : काजुओ इशिगु…
जर्मनी र बेलायती वैज्ञानिकले पाए रसायनशास्त्रको नोबेल पुरस्कार
काठमाडौं । यस वर्षको रसायनशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार जर्मनीका बेन्जामिन लिस्ट र बेलायतका डेभिड डब्ल्यूसी म्याकमिलानले पाएका छन् । अणु बनाउने नयाँ तरिकाको विकास गरेकोमा उनीहरुलाई संयुक्तरुपमा नोबेल पुरस्कार दिने घोषणा गरिएको हो ।
स्टिभ जब्सः बहुमूल्य कम्पनी एपलका संस्थापकको किन धेरै चर्चा हुन्छ ?
एजेन्सी । स्टिभ जब्स मौलिक ढङ्गले चिनिन्थे। उनमा चमत्कारिक र विशेष खालको स्वभाव सहितको नेतृत्व गुण थियो। ५६ वर्षको उमेरमा क्यान्सरका कारण निधन भएको १० वर्षपछि निकै चर्चा गरिने एपलका सहसंस्थापकका केही विशेषताहरूको यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। हामीलाई चाहिएको कुरा हामीभन्दा पहिले थाहा पाउने व्यक्ति स्टिभ जब्स बजार…
केही घन्टा फेसबुक बन्द हुँदा जुकरबर्गलाई ६ अर्ब बढी घाटा
काठमाडौं । संसारभर विभिन्न मुलुकका प्रयोगकर्ताले करिब ६ घण्टा फेसबुक चलाउनबाट बञ्चित रहे । फेसबुकसँगै इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, मेसेन्जर र ओकुलसल ‘डाउन’ भएको थियो । फेसबुकसहितका साइट बन्द भएर फेरि सुरू हुँदासम्म फेसबुकका सिइओ मार्क जुकरबर्गले भने ६ अर्बभन्दा बढी अमेरिकी डलर गुमाएका छन् । ब्लुमब…